UMongameli weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika uzakuThatha iNxaxheba kwiiMbasa eziKhethekileyo ze-Afrik
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » UMongameli weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika uzakuThatha iNxaxheba kwiiMbasa eziKhethekileyo ze-Afrik
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Awards • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseMauritania eziQhekezayo • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel
UMongameli weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika u-Alain St. Ange
IFinancial Afrik Awards yintlanganiso yonyaka ekhethekileyo yezemali zaseAfrika. Idibanisa ii-CEO kunye nabaphathi abaphezulu abavela kumacandelo ahlukeneyo emali.
Umsitho wamabhaso ubanjwa phantsi kwenkxaso ephezulu yoHloniphekileyo u-Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, uMongameli weRiphabliki.
Kwifomathi ebonakalayo, malunga nababhalisi abangama-400 baya kulandela iintsuku ezimbini zenkqubo yenkomfa.
Kuya kubakho abantu abamalunga nama-200 abathatha inxaxheba abavela kumacandelo ahlukeneyo oshishino lwemali.
Iphephandaba lezemali lase-Afrika jikelele i-Financial Afrik, ibambisene neSebe lezoQoqosho kunye nokuPhakanyiswa kwamaCandelo eMveliso yaseMauritania, baye baqinisekisa ukuba bameme u-Alain St.Ange, uMongameli welizwe laseMauritania. IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB) kunye nowayesakuba nguMphathiswa wezoKhenketho waseSeychelles, uPhapho loLuntu, amaZibuko nezaseLwandle, ukuba athathe inxaxheba kuhlelo lwesine lweeMbasa zeFinancial Afrik.
La mawonga aya kuqhutyelwa kwiHotele iAl Salam Resort eNouakchott, eMauritania, ngomhla we-16 nowe-17 kweyoMnga ngowama-2021, phantsi komxholo othi “i-Afrika ngo-2050.”
Umnyhadala, phantsi kolawulo oluphezulu lukaMohamed Ould Cheikh El Ghazouani, uMongameli weRiphabhlikhi, uza kudibanisa abantu abangama-200 abavela kwihlabathi lezoqoqosho, ezemali, kunye neshishini kwaye, malunga nababhalisi abangama-400 abaza kulandela inkomfa iqonga elizinikeleyo.
E-Nouakchott, iya kuba ngumbuzo wokuchaza iindlela zehlabathi ze-Afrika kwi-2050 ukwenzela ukunika amazwe kunye nemibutho izixhobo zokuhlalutya zokulindela ngobuchule.
The Ezemali Afrik Amabhaso sisiganeko esikhethekileyo esidibanisa minyaka le, ukusukela ngo-2018, iingcali, abaphathi abakhulu beebhanki, iinkampani zeinshorensi, amaziko karhulumente, iifintechs, ukutshintshiselana ngesitokhwe, kunye neengxowa-mali zotyalo-mali, njl. kwenye indawo.
IFinancial Afrik Awards iza kuphela ngorhatya lwala mawonga awonga abantu abazibaluleyo kumacandelo abo.
Malunga neBhodi yoKhenketho yase-Afrika
Eyilwe kwi-2018, i IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika (ATB) ngumbutho owaziwayo kumazwe ngamazwe ngokusebenza njengento ekhuthaza uphuhliso olunenkathalo lohambo nokhenketho ukuya, ukusuka, kunye nangaphakathi kwingingqi yaseAfrika. I-ATB yinxalenye ye Umanyano lwaMazwe ngaMazwe lwaBalingani bamaKhenketho (ICTP). UMbutho ubonelela ngenkxaso ehambelanayo, uphando oluqondayo, kunye neziganeko ezintsha kumalungu awo. Ngothelelwano namalungu ecandelo labucala kunye nelikarhulumente, iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika iphakamisa ukukhula okuzinzileyo, ixabiso, kunye nomgangatho wohambo kunye nokhenketho e-Afrika. UMbutho ubonelela ngobunkokeli kunye neengcebiso kumntu ngamnye kunye nesiseko seqela kwimibutho engamalungu awo. I-ATB iyakhula kumathuba okuthengisa, unxulumano noluntu, utyalo-mali, ukuthengisa, ukukhuthaza, kunye nokuseka iimarike ze-niche.